मिलन बगाले शनिबार, भदौ २६, २०७८, २०:५८
रातको ११ बजेको छ। संसद्‍ भवनको घम्साघम्सी झेलेर डेरामा आएको पनि केही घण्टा भइसक्यो। जीउ टन्टनी दुखिरहेको छ। माननीयज्यूहरुको तानातानमा परेर च्यातिएको कोट किलामा झुन्डिरहेको छ। कोटले गिज्याएझैं छ। लोप्पा खुवाएको महसुस भैरहेछ।
त्यही कोट हेर्दै दिउँसोको तमासा सम्झिरहेको छु। माननीयज्यूहरुले आज त अति गर्नुभो। हातमा क्वाप्पै टोकिदिनुभो। दाहिने हातमा गहिरो घाउ छ। त्यसकारण खाना खान पनि अप्ठेरो भयो। श्रीमतीले आफ्नै हातले खाना खुवाउँदै माननीयज्यूहरुलाई सकेको गाली दिइन्। म हाँसिरहे। उनी छक्क परिन्।
माननीयज्यूले दाँत बेस्सरी गाड्नुभएछ। चोट गहिरै छ। घाउ ड्रेसिङ गराएर आएको छु। हाकिम साबले दुई दिन छुट्टीमा बस्न भन्नुभएको छ।
हाम्रो संसद्‍भित्रको घम्साघम्सी कुनै नौलो कुरो होइन। यस्तो त चलिरहन्छ। संसद्‍ चल्नु भनेकै घम्साघम्सी हुनु हो। हानाहान र तानातान हुनु हो।
आजको घम्साघम्सी देखेर चाहिँ साह्रै चित्त दुख्यो। घम्साघम्सी चलिहरँदा मैले हाम्रो भाग्य, भविष्य फुटिरहेको देखें। चुनाव जितेर देश बनाउँछु भनेर आएका मान्छे गाँठ्ठे। कोही मन्त्री बनिसकेका। कोही सभामुख बनिसकेका। कोही प्रधानमन्त्री बनिसकेका। टीभीमा ठूल्ठूला कुरा बोल्ने, पत्रिकामा ठूल्ठूला कुरा लेख्ने, घम्साघम्सी नहुँदा रोष्ट्रममा उभिएर ठूल्ठूला कुरा गर्ने मान्छेहरु। लाज, सरम, डर, घिन कता हराएको?
संसारले टीभीमार्फत हेरिरहेको छ। उम्लेको रिस सेलाउने छाँटकाँट छैन। हिजोभन्दा आज झन् हिंस्रक। देशैभरको रिस थुप्रिने ठाउँलाई संसद्‍ भन्नुपर्ने। कठै हामी नेपाली!
हिजो त अत्याचारै गरे। कोपरे। लोपारे। खुट्टा खुल्चिए। लुगा तानिदिए। टोपी हुत्याइदिए। महिला मर्यादापालक साथीहरु पनि घाइते भएका छन्।
तीजको बेला अरु महिला छमछमी नाचिरहेका छन्। हाम्रा महिला मर्यादापालक साथीहरु सांसदहरुको हानाहान र तानातानमा परेका छन्।
अहिलेको सभामुखज्यू माओवादी हुनुहुँदो रहेछ। उहिल्यै स्कूलको हेडसर पनि बन्नुभएको रहेछ। तर यति धेरै डरपोक सभामुख मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। सधैँ डराएजस्तो। सधैँ अल्मलिएजस्तो। सधैँ आत्तिएजस्तो। लेखेर ल्याएका कागजपत्र त जसोतसो पढ्नुहुन्छ, केही गडबड भएर स्थिति सम्हाल्न पर्‍यो कि उहाँको होसहवास् उड्छ। नियमकानून केही जान्नुहुन्न। एक नम्बरको हुस्सु हुनुहुन्छ।
यसो फकाउनी, फस्ल्याङफुस्लुङ पार्नी, सुवास अध्यक्षज्यूले झैं मुसुमुसु हाँसेर नियम कानुनका चिप्ला र काउला कुरा गरेर अलिअलि पेल्नी, केही ढंग छैन बरा। हात काँपेको मात्र देखिन्छ। काँप्दै आउनुहुन्छ। काँप्दै जानुहुन्छ। अलमल्ल परेको देखेपछि कर्मचारीले खुसुखुसु लेख्दै कागज दिइरहन्छन्।
अर्थमन्त्रीज्यू संसद्‍मा गुरिल्ला शैलीमा गुरुरुरुरु...दौडिनुभयो। उहाँको गुरिल्ला दौडाइ देखेर म त झन्डै हाँसेको। मर्यादापालकले मर्यादा भुलेर हाँस्न मिलेन नि! मर्यादा भुल्ने काम त माननीयज्यूरुको पो हो त।
अर्थमन्त्रीज्यू संसद्‍मा गुरिल्ला शैलीमा गुरुरुरुरु...दौडिनुभयो। उहाँको गुरिल्ला दौडाइ देखेर म त झन्डै हाँसेको। मर्यादापालकले मर्यादा भुलेर हाँस्न मिलेन नि! मर्यादा भुल्ने काम त माननीयज्यूरुको पो हो त। कता हाँस्ने कुरा गरेको होला, मैले? उहाँलाई देख्दा मेरो त सातो जान्छ। फौजी भन्दैमा हुन्छ र ? फौजीको पनि सातो जान्छ, कहिलेकाहीँ।
एकजना महिला माननीयले हिजो अति गर्नुभो। मैले नाम त भुलें। माइक उखेलेर सभामुखलाई हान्न खोजेर जात्रा। गृहमन्त्रीज्यूको माइकै उखेल्नुभएछ। जसोतसो माइक खोस्न सकियो, नत्र त ठूलै दुर्घटना हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हत्तपत्त माइक लुकाइहाल्नुभयो। त्यो दृश्य मैले देखिरहेको थिएँ। प्रधानमन्त्री बाठो हुनुहुँदो रैछ।
गृहमन्त्रीज्यू त कस्तो हुस्सु! माइक उखेल्न आएको परैबाट देखेपछि यस्सो निकालेर लुकाउनुपथ्र्यो नी। उहाँ एसएसबीले तुइन काटेको रिपोर्ट लुकाउन चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ। बोल्दाखेरि सत्य कुरा लुकाउन पनि सिपालु हुनुहुन्छ।
महाकविको घरको विनाशलीला : कवि–कुञ्ज बन्छ कि निर्माण सामग्रीको ‘निकुञ्ज’?
शहरको ऋषि पञ्चमीले सम्झाएको सुदूरपश्चिमको छाउपडी बाजुरा सदरमुकाममा पढ्न आएपछि पहिलो पटक तीजबारे थाहा पाएको थिएँ। मेरो बाल्यकालमा सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँतिर यो चाडबारे थाहा नै थिएन।... शनिबार, भदौ २६, २०७८